Walaac laga qabo falalka ammaan xummo ee xaafadaha qaar ee Göteborg ka taagan | Somaliska
Iyadoo xalay magaaladda Göteborg lugu dilay gaar ahaan xaafadda Frölunda labo wiil oo walaalo ah, ayaa hadana dadka deegaanka xaafadaas waxaa ay walaac ka muujiyeen falalka ammaan darradda ah ee soo laa laabtay.
Dadka deegaan oo saxaafada maqalka iyo muuqaalka leh ee gudaha u waramayey ayaa sheegay ineey dareemayaan cabsi iyo wel wel la xirriira falalka dilka ah ee u dhaxeeya kooxo falal dambiyeedka geeysta.
Soomaalida degan xaafadaas oo aan qaarkood qadka taleefanka kula xirriirnay ayaa u sheegay Somaliska .com ineey dareemayaan cabsi iyo wel wel ka badan intii hore. Gabar diiday in magaceeda la xuso ayaa sheegtay ineey qorsheeyneyso siddii ay gebi ahaanba uga guuri laheyd magaaladda Göteborg oo ay u aragto magaalo isku badashay goob dagaal.
“Soomaaliya waxaan uga soo cararay waa cabsi iyo amni xumo hadana cabsi iyo ammaan xumo kale aa” ayey tiri iyadoo ku dheeraatay hadalkeeda ayey sii raacisay in markasta dhaguhua u taagan yihiin kuna fakareyso siddii ay magaaladda banaankeeda guri uga raadsan laheyd walow ay tiri waa adag tahay in sahal lugu helo.
Ma ahan gabadhaas dadka aan la tirin karin ee dareemayo cabsida la xirriirta falalka amni xumo ee xaafadaha qaar ka taagan. Waxaa jira qoysas soomaali ah oo qudhooda booliska ku wargeliyey ineey yihiin bartilmaameed sidaas aawgeedna laga rarayo xaafadihii ay dagaanaayeen.
Sidoo kale horaantii bishii oktoobar, ayaa qoys soomaali ah waxaa lugu tuuray waxyaabaha qarxa ee gacanta laga tuuro balse aaney cidi wax ku noqon. Dilkii xalay ka dhacay xaafadda Frölunda ee Göteborg ayaa ku soo beegmaya maalin ka dib markii xaafad lugu magacaabo Lövgärdet oo ku taala degmadda Angered lugu dilay wiil dhalinyarro ah. Falalkaan amaan darrada ah ayaa noqday kuwo soo la laabtay, saas oo ay tahayna ciidamadda iyo maamulka gobolka waxaa ay wadaan da daalo ay ku doonayaan in dib magaaladda amnigeedii dabiici ku soo noqto.
Masaajidka ay soomaalidu maamusho ee Göteborg oo albaabada la iskugu dhiftay